काठमाण्डौ, माघ ७ । नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्ने जनयुद्धमा होमीएको माओवादीले बिद्रोह गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाले माओवादीका माग सम्बोधन नगरेपछि जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो ।
वि.सं. २०५२ साल फागुन १ मा विद्रोह गर्दै जनयुद्धको घोषणा गरेर भूमिगत भएका प्रचण्ड करिब ०७४ फागुन १ सम्ममा पार्टी एकता भइसक्ने आधार बनाइएरहेका छन् । सिंगो नेपाललाई नेतृत्व गर्ने एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको खाका कोरिरहेका छन् ।
माओबादी नेता आचार्यले सोधेको प्रश्नले देउवालाई समस्या
बालुवाटारमा ओली–प्रचण्ड वार्ता, के के कुरा भयो ?
हेटौँडाबाट राजधानी नसार्न मुख्यमन्त्रीलाई देउवाको आग्रह
कसैकाे इच्छा र लहडले पार्टी एकता टर्दैन : माधव नेपाल
प्रचण्डले गरे वैशाख ९ गते एकता गर्न नसक्नुको खुलासा
यातायात क्षेत्रमा जस्तै अन्य क्षेत्रका सिण्डिकेट पनि अन्त्य गर्छु : गृहमन्त्री थापा
एमाले स्थायी समितिको बैठक बस्ने
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आगामी महाधिवेशनसम्म मिलेर जाने भद्र सहमति बनेको छ ।
एमाले निकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अध्यक्ष ओलीले एकता महाधिवेशनसम्म आफूलाई साथ दिनको लागि नेता नेपालसँग आग्रह गरेका छन् । नेता नेपालले पनि ओलीको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारका हरेक कदममा माधव नेपालको साथ खोजेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेलले एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता गणितको आधारमा नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘संख्या अर्थात् ५०-५० को आधारमा एकता हुँदैन, अनुपात, गणित वा बराबरीको आधारमा हुँदैन, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पोखरेलले पार्टी एकता भन्नेबित्तिकै दुवै पार्टी अब एक हुने भएकोले गणितको आधारमा एकता नहुने स्पष्ट पारे ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अब बस्ने केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले रित्त रहेका पदाधिकारी मनोनित गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले सभापति शेरबहादुर देउवा भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित भएको भनेर आरोप लगाएका छन् भनेर सोधेको प्रश्नमा नेता महतले भने, ‘सभापतिको विरोध गर्नेहरुको पार्टीभित्र अब खैरियत छैन ।’
उनले केसीलाई केन्दिय सदस्य सभापति देउवाले नै मनोनित गराएको स्मरण गराए ।
एमाले-माओवादी एकताबारे कांग्रेस नेता पौडेलले गरे यस्तो खुलासा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले–माओवादीबीचको पार्टी एकता नाटक मात्र भएको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले बिहीबार बागलुङमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘एमाले माओवादी मिल्ने चरणमा छन्, पार्टी मिल्नु राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, कम्युनिष्टको एकता स्वार्थ र अवसरमा आधारित नाटक जस्तो हुन्छ, यो पनि नाटक मञ्चन हो ।’ कम्युनिष्ट पार्टीको भन्ने एउटा र गर्ने अर्को देखिएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेस प्रतिपक्षमै बसेर राष्ट्रका लागि आवश्यक भूमिका खेल्ने बताए ।
तयारी नपुगेकाेले पार्टी एकता भएन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
गोरखा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बैशाखभित्रै पार्टी एकता टुङ्ग्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १२ कुन्दुरको महेन्द्र माविमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको सुरुवात गर्दै नेता श्रेष्ठले तयारी नपुगेकोले बैशाख ९ गते पार्टी एकता हुन नसकेको बताएका हुन् ।
अाेली र दाहालबीच बालुवाटारमा चलेकाे साढे तीन घण्टाकाे वार्ता सकियाे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ बीच झण्डै साढे तीन घण्टा चलेको वान टुु वान वार्ता सकिएको छ ।
वार्तामा विवादित विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापाकोटाले बताए । यद्यपी यसवारे नेताहरुले भने केही बताएका छैनन् ।
दुई पाटर्टीबीच जनयुद्ध, निर्वाचन चिन्ह र एकीकृत पार्टीमा रहने संख्याका बारेमा सकारात्मक छलफल भएको हो ।
झापा । २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका शहीद सुरज विश्वासको परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
शहीद परिवारका लागि सरकारले बनाएको नीति तथा कानून सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन नहुँदा शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको निरीक्षणपछि आज बिहान निर्देशन दिदै उनले देशलाई हिजोकै अस्थिरतातर्फ फर्काउने दाउमा केही लागिपरेको बताए । उनले भने “सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै त्यसलाई रोक्नु आवश्यक छ ।”
काठमाडौँ । युवा संघ नेपाल केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षमा रमेश पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यही वैशाख ३ गतेदेखि आज बिहानसम्म बसेको बैठकले उपाध्यक्षमा किरण पौडेल, चन्द्र लामा, गोविन्द थापा, क्रान्ति बुर्लाकोटी, पर्शुराम बस्नेत, हस्त शाही र प्रभात कटुवाललाई मनोनीत गरेको छ ।
भरतपुरकाे विवादित जग्गामा विप्लवका कार्यकर्ताले गाडे झण्डा
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चितवनले भरतपुर महानगरपालिका–१३ स्थित विवादित ९ कठ्ठा जग्गामा पार्टीको झन्डा गाडेर कब्जामा लिएको छ ।
घरजग्गा व्यावसायी रमा पौडेल आले र धनन्जय पौडेलको नाममा रहेको सो जग्गालाई किर्ते कागज गराएर पास गर्न खोजेको भन्दै नेकपाले कब्जा गरेको हो ।